Yechokwadi Mari Roulette Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(565 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Real mari roulette inoridzwa munzvimbo zhinji-dzakavakirwa kasinos munyika, kunyangwe pamucheto wemba pamutambo uyu wakasiyana nekasino imwe kunotevera. Munzvimbo yepamhepo yekutamba, misiyano iyi inowanzo kupunzika nekondinendi, kunyange mamwe maguta kana matunhu angapa mikana iri nani yekutamba. Izvo iwe zvaunofanirwa kuziva kuti kune misiyano yakasimba pane zvisiri izvo iwe zvaunogashira, saka dzidza izvo chero chikuru chinyorwa cheRoulette chinokupa iwe. Pakati pechinyorwa chino, ini ndichakurukura sarudzo dzakakura kwauri. Kana wapedza, iwe unofanirwa kuziva zvese zvaunoda kuti uzive kuita sarudzo dzakanaka.
List kuti Top 10 Roulette Sites
American & Germany Roulette
European roulette ndiyo shanduro yemutambo inoitwa yakakurumbira nemakasinioni eMonte Carlo muPrincipital yeMonaco paFrance Riviera. Kunyangwe zvaifungwa nevanhu vese, imwe chete-zero yeEuropean roulette yaisava yekutanga shanduro yemutambo. Vatambi vemitambo muEurope pakati pezana 19th yezana yakatanga kupa kamwe-zero mitambo yekukwezva vatengi, vachipidigura tsika yemazana maviri emakore e-zero roulette yemitambo. Kuve ne zero imwe chete slot kana homwe pawiricheya ndiyo mukana wakakura kune unobhejera, nekuti mabheti mazhinji ari pawiricheya ndiwo anodonha apo bhora rinopera mune imwe yemapepa e0. Neichi chikonzero, iyo 2.70% imba pamuganho ndeyeEuropean roulette iri nani kupfuura shanduro yeAmerican yemutambo.
American roulette inonyanya kufanana fomu yepakutanga yemutambo sezvo yairidzwa mu17th uye 18th mazana emakore. Kunze kwehomwe muhomwe dzenhamba 1 kuburikidza 36, vhiri rinosanganisirawo iyo 0 uye 00 slots. Zvekare, kuwedzera ichi kurasikirwa muhomwe kunoderedza kusawirirana kwako kwekukunda. Iyo yekumusoro imba ndeye 5.26% paAmerican kana Las Vegas roulette, iyo inonzi zvakare-zero-roulette. Mumamiriro mazhinji, iwe uchada kudzivirira mutambo uyu, kana zvichikwanisika. Panhambo dzisingawanzo, iwe unogona kuwana mitemo inokanganisa kufunga uku. Paunenge usina chokwadi, tamba uchishandisa vhiri reEurope.
Paunenge uchitamba chaiyo mari roulette mukitchen-uye-yevhu kasino, iwe uchaona kuti iyo American roulette inoridzwa munzvimbo zhinji muNorth America, nepo mutambo weEuro uchitambwa kwese kumwewo pasi. Mamwe ma Las Vegas Strip makasinopa anopa kamwe-zero roulette munzvimbo dzekusarudza nzvimbo dzemitambo yavo pasi pane dzimwe nguva mukati mevhiki, kazhinji semadhora akakwira mitambo nemabheti mashoma emadhora 25 kana anopfuura. A mashoma eaya eVegas Strip makaseti anopa dzimwe nguva $ 15 European roulette, kunyange iwe ungangofanira kushanyira panguva yakatarwa vhiki imwe neimwe kutamba mitambo. Vanhu vakatumira pamhepo kuti vashoma veTunica, Mississippi makasinopa akapa kamwe-zero mitambo munguva yakapfuura, asi hazviratidzi sezvazviri nhasi.
MuAtlantic City, mitemo yeNew Jersey inomanikidza makasino kupa mirau yakasarudzika paAmerican roulette. Mitemo iyi inonzi "la partage", chinova chiFrench chekuti "zvezvikamu" kana (muchiAmerican parlance) "muchidimbu". Zvinoitwa nemutemo uyu ndezvekuti iwe unongorasikirwa nehafu yekubheja kwako paunoita wa-mari-kubheja uye bhora rinomhara pane 0 kana 00 slots. Saka kana iwe ukaita $ 20 wager pane iyo hi / lo, tsvuku / nhema, kana kunyange / kusanzwisisika zvirevo uye bhora rinomhara pamazero, iwe unongorasikirwa ne $ 10. Izvi zvinodimura kumucheto kweimba pamabheti-emari kunyangwe 2.63%, izvo zvinoita iyi vhezheni yeAmerican roulette kubheja kuri nani pane yeEuropean roulette. Nehurombo, akati wandei emaBhodiwalk kasinasi izvozvi anopa "Rapid Roulette", iyo inopa iwo iwo iwo mirawo yakanaka (nokudaro inogutsa mitemo yeNew Jersey), asi ichiridza nekukurumidza kupfuura mutambo wakajairwa. Sezvaungave wafungidzira, izvi zvinokufumura iwe kuenda kumucheto kweimba kakawanda paawa, nokudaro uchiwedzera mari yepasino yevhareji paawa.
Roulette ndeimwe yemitambo yematafura iyo inongowanikwa mumakadhi mune dzimwe nyika. Somuenzaniso, inotaura seColorado, Connecticut, Georgia, Idaho, uye Illinois ine makasinasi anopa mutambo. (Munyaya yeGeorgia, uri kutarisa kune casino cruises panzvimbo yekodhi chaiyo yebato uye yemarara.) Florida inopa roulette-mhando yemutambo, asi nekuda kwemitemo yehurumende, haibvumirwi kuidana iyo.
Paunotamba online roulette yemari chaiyo pamhepo, iwe unowanzo kuwana maAmerican neEuropean roulette ma-link-padivi. Sarudzo yemitambo ipi inotamba iri pachena (tamba iyo Euro mutambo), kunze kwekunge waona kuti kasino ine mimwe mitemo inofarira mutambo weUSA. Nguva zhinji, anoshanda anongopa vatambi sarudzo, achitarisira kuti vasingazivi veAmerica neveCanada vanobhejera mutambo weAmerica mutambo, vachifunga kuti zviri nani. Kusiyana nekasino live, mushambadzi haafanire kutamba mumwe mushandi kuti abate mitambo iyi, saka zvishoma kana hapana mari (zvichienderana neanopa software) kupa iyo yekuwedzera mutambo sarudzo.
Zvekare, kana iwe uine sarudzo yevaviri uye iwe usingazive kuti ndeipi mitemo, tamba iyo European vhezheni yemutambo wakapihwa. Mikana ndeyekuti, iri sarudzo iri nani. Ini ndinofanira kutaura kuti European roulette yemari chaiyo inopa "la partage" mitemo (kana yakafanana "en jeri" / mitemo yevasungwa) ndiyo yakanakisa vhezheni iwe yaunogona kutamba. Izvi zvinoderedza imba kumucheto pasi kusvika 1.35%, ino fananidzwa nemitambo senge craps uye baccarat. Mune mamwe mazwi, iyi yakasarudzika vhezheni yemutambo ine mamwe akanakisa maitiro kune chero mutambo uri online online kasino isina zano chinhu. Baccarat, craps, uye roulette zvinowanzove nezano diki rekurangarira (kunze kwekuziva kuti ndezvipi zvekubheja zvekugadzira), saka vanopa zvakanakisa zvisingaiti pasina kudzidza uye kuramba vakapinza apo uchibhejera.
Roulette Wagers - Inside vachibhejera zvinhu
Mukati bheti ndeavo vanoitwa nhamba imwe chete kana mapoka maduku ehuwandu huwandu. Vanodanwa mukati memabheti nokuti mabheji enyu ekutengesa akaiswa mukati mehuwandu hwemazita. Bhati yakananga inosanganisira imwe nhamba imwe chete, uye iwe uchaisa chip yako zvakananga pane nhamba. Bheji yakapatsanurwa inogadzirirwa nhamba dze2, uye yakaiswa pamutsara uchiparadzanisa iyo nhamba mbiri. Nzira yekutengesa mumugwagwa inowanikwa pamapeji 3 mumutsara, akadai se 1-2-3 kana 4-5-6. Iwe uchaisa bheji iyi kune kunze kwenhamba yenhamba iyo inotanga kurongeka uku uye, sezvo nhamba dziri mumugwagwa mfupi, vanoidana iyo mumugwagwa.
Kuenderera mberi pakurongwa kwebheti dzomukati, kona kana kuti quad yekutengesa inosanganisira 4 nhamba. Nhamba idzi idzi dzinofanira kupindirana, dzichikugonesa kuisa chips apo makona mana anoparadzana pamwechete. Bhasikiti yekutengesa ndeye 5-nhamba inobhadhara muAmerican roulette, uye inosanganisira 0, 00, 1, 2, uye 3. Usaita bhasikiti kutengesa, nokuti ine mamiriro akaipisisa mumutambo; iyo ine 7.89% imba inopinza. Pakupedzisira, mumigwagwa miviri kana mumutsara wekutengesa kunosanganisira maviri pedyo nemabheji emigwagwa panguva imwe chete. Iwe uchaisa zviputi pamutsara pakati pemigwagwa miviri, zvakare zvakare kune imwe kunze kwehuwandu hwekuverenga.
Roulette Wagers - Kunze vachibhejera zvinhu
Nepo mukati kubhejera kunosanganisira matanhatu kana mashoma manhamba, iwo ekubheja ekunze anosanganisira kubheja pane gumi nemaviri kana anopfuura manhamba panguva. Iwe unogona kuti kubheja uku kuri pamhando dzenhamba. Nekuti huwandu hwakawanda hunobhadharwa, mikana yekuhwina mabheti aya akakura pane emukati ma wager, asi mubhadharo uri mudiki. Ramba uchifunga kuti (kunze kwebhokisi kubheja), ese ma roulette wager ane iwo maitiro akafanana, kunze kwekunge uri kushandisa yakasarudzika mitemo. Kubheja pane "gumi nembiri" kunosanganisira kubheja chero pa6 kusvika 12, 1 kusvika 12, kana 13 kusvika 24. Kuita bheji-kunyange yemari inosanganisira kubheja pane yakakwira / yakaderera chirevo, tsvuku / nhema nhema, kana iyo kunyange / isinganzwisisike chirevo. . Ivo vanodana idzi kunyange-mari wager nekuti vanobhadhara pa25: 36, asi ramba uchifunga kuti hauna 1% mukana wekuvarova, nekuda kwekuvapo kweiyo 1 slots pane vhiri.
Column vachibhejera zvinhu zviri 12-nhamba vachibhejera zvinhu pamusoro mumwe mapoka matatu nhamba. Nhamba marongerwo vanosanganisira 3 neshongwe 36 nhamba, saka mumwe mbiru ane 12 nhamba mairi. Somuenzaniso, imwe mbiru kunosanganisira nhamba 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34. Ukaisa wagers izvi nechepasi nerimwe mbiru. Pakupedzisira, unogona kuita nyoka wager they pamusoro unomonereka semufananidzo nhamba izvo crisscross kuti marongerwo. Nhamba zvaisanganisira ndivo 1-5-9-12-14-16-19-23-27-30-32-34. Kunyange uchaita kunzwa vanhu ungazviti ndiko Kuziva bheji, nekuti iwe uri kungotaura Betting rimwe chikwata chimwe nechimwe nhamba idzi sezvo zvawaizodya, hazvina kukodzera tsanangudzo, nekuti sezvisingaiti kuramba zvakafanana pamusoro wager they ichi.
Online Roulette Mari Real
Pane ipi neipi yepaIndaneti inowanikwa paIndaneti, imwe neimwe yemagare iyi inopiwa muprogram yavo. Kusarudzwa pakati pepakati mukati kana kunze kwepabheti kune zvakawanda zvokuita nehuwandu hwekuti iwe unoda kuhwina uye sei iwe unobhadharwa paunoita. Kana iwe uchinge uchinetseka uchimirira huwandu hwemapinini kuti uwane bheti, saka iwe unofanirwa kutamba kunze kwemakumbo. Kana iwe uchiona zvichifadza zvikuru kuva nemari huru, iwe unofanira kutamba mukati memakumbo. Kunze kwebhokisi bheti, ngoro dzose dzine imba imwe chete, saka usatarisira kuwana nzira yekushandira pakusarudza pari ipi kuedza.
Kana uchida kuongorora mafungiro ako kubva kune imwe nzira, iwe unogona kuzvitaurira kuti imba iri nechepamusoro pako iwe pese, saka vashoma vanochera ipapo, iyo yakawanda uye haingaiti inogona kuchinja zvabuda. Muchiitiko ichocho, zvinonzwisisika kuisa mukati mebhadhiti, sezvo iwe ungakunda 35: 1 kubhadhara pa 20th spin (somuenzaniso) uye famba nebhadhiro yakanaka. Kana iwe ukakurira 1: 1 uye 2: 1 mubhadharo, iwe unotarisana nechepakati peimba kakawanda. Zvechokwadi, kuisa mukati memakumbo kunoreva kuti uchava nemisangano yakawanda apo iwe unorasikirwa neboka remabheti uye usina chinhu chaunogona kuratidza nokuda kwekubheja kwako, nokuti hausi kunze kwebvunzo kuti 50 ku 100 spins iende pasina nhamba imwe chete Nguva dzose vachirova. Kana iri iyo nhamba iwe uri kutengesa, iwe ucharasikirwa nemataundi emari.
Izvo zvataurwa pamusoro apa hazvishandisi paunenge uchitamba nemashoko ataurwa pamusoro apa kana kuiswa mujeri mitemo, nokuti izvi zvinoparadzanisa mhirizhonga yeimba kune mari-iyo mari yekubhadhara mari, asi chete iyo-mari yekubhadhara mari. Kana uri kutamba nemitemo iyi mune imwe yeEurope kana yeAmerica chaiyo mari yekutengesa, zviri nani kurongedza kugara uchiita mari-yebhadhiro yakatsvuka / yakasviba, yakakwirira / yakadzika, kana kunyange / zvisingaiti.
0.1 List kuti Top 10 Roulette Sites
2.4 Roulette Wagers - Inside vachibhejera zvinhu
2.5 Roulette Wagers - Kunze vachibhejera zvinhu
2.6 Online Roulette Mari Real